आयुर्वेदिक औषधिदेखि सावधान्! – Word of Truth, Nepal
1. आयुर्वेद हिन्दूवाद हो।
“आयुर्वेदको ज्ञान ब्रम्हाबाट दक्ष प्रजापतिलाई, अनि आश्विन जुम्ल्याहाहरू (दैविक वैद्य) लाई सुम्पिइएको थियो, त्यसपछि इन्द्रलाई दिइएको थियो। साधु भारध्वजले इन्द्रबाट ज्ञान स्वीकार गर्नको निम्ति स्वर्ग जाने स्वयंसेवा गरे, र त्यसैले उनी आयुर्वेदको ज्ञान ग्रहण गर्ने पहिलो मानव बने” (The Ayurveda Encyclopaedia, published by Health Harmony, New Delhi, 2006, p. xxiii)।
“जडीबुटीहरू, आहाराहरू, सुगन्धहरू, रत्नहरू, रङहरू, योगा, मन्त्रहरूको ज्ञान पत्ता लगाउने विधिहरू … दैविक प्रकाशको माध्यमबाट आएका हुन्। … प्रारम्भदेखी चार प्रमुख वैदिक पुस्तकहरू आत्मिक रुपमा नै अस्तित्वमा थिए। यिनीहरूलाई वेदहरू भनिन्छ: ऋग, साम, यजूर र अथर्व। आयुर्वेदको प्रयोग वैदिक ज्योतिषवाद (अर्थात् कुनै व्यक्तिको भित्री ज्योती) सँग-सँगै गर्ने गरिन्थ्यो। बिस्तारै, आयुर्वेदलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा छुट्टै प्रणालीको रुपमा सङ्गठित गरियो र अथर्व वेदको हाँगाको रुपमा कायम गरियो” (The Ayurveda Encyclopaedia, p.3)।
2. आयुर्वेदको उद्देश्य एउटा व्यक्तिलाई ऊ ईश्वर हो भनी सिकाउनु हो।
“वैदिक दर्शनशास्त्र अनुसार, जीवन दैविक छ र जीवनको उद्देश्य भनेको नै हाम्रो भित्री दैविक स्वभावलाई महसुस गर्नु हो। आयुर्वेदको भाषामा भन्नुपर्दा, जति धेरै मानिसहरूले उनीहरूको दैविक स्वभावलाई जान्दछन्, उनीहरू त्यति नै धेरै स्वस्थ हुन्छन्। त्यसैले बिरामीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै भित्री दैव‍िक स्वभावलाई जगाउन प्रोत्साहन गर्न र सहायता गर्न आयुर्वेद चिकित्सकको जिम्मेवारी हो। जब बिरामीहरूलाई उनीहरू आफैभित्र ईश्वरत्व छ भन्ने सिकाइन्छ, उनीहरूले जीवन र ईश्वरसित संयोजनको महसुस गर्छन् (यद्यपि हरेक बिरामीले ईश्वरलाई परिभाषित गर्दछ)” (The Ayurveda Encyclopaedia, p.9)।
3. आत्मिक शक्ति ब्रम्हाण्ड र मानिसबाट भएर बहन्छ भनी आयुर्वेदले दावी गर्दछ।
4. शरीरहरू तीन प्रकृतिका हुन्छन् भनी आयुर्वेदले दावी गर्दछ।
“आयुर्वेदिक औषधिअनुसार, त्यहाँ तीन प्रकृतिका शरीरहरू हुन्छन्: काफ, पित्त र वात। काफ दोष भनेको ठूला कदका व्यक्तिहरू हुन् जोहरूका काँध र कम्मरको भाग बराबर मात्रामा चौडा हुन्छन्। पित्त दोष भनेको मध्यम शारीरिक बनौट भएका व्यक्तिहरू हुन् र वात दोष भनेको पातलो वा सानो शरीरिक बनौट हो। आयुर्वेदिक औषधिको अनुसार शरीरका प्रकृतिहरू, विशिष्ट किसिमका बिमारीहरूबाट पीडित हुन सक्छन् र शारीरिक जटिलताहरू विशिष्ट किसिमकै खानेकुराहरूद्वारा सामना गर्न सकिन्छ” (Ayurveda Medicine, Examhealth.com, Mar. 2, 2012)।
5. आफ्नो उद्देश्यहरू पूरा गर्नको निम्ति आयुर्वेदले मूर्तिपूजासँग सम्बन्ध राख्ने अभ्यासहरूको प्रयोग गर्दछ।
1. आयुर्वेद शैतानी मूलको हो।
“तिमीहरू मूर्तिपूजक नबन, जसरी तिनीहरूमध्ये कतिजना बने…” (१ कोरिन्थी १०:७)।
“यसकारण मेरा प्रियहरूहो, मूर्तिपूजादेखि भाग” (१ कोरिन्थी १०:१४)।
“तर म भन्दछु, जुन चीजहरू अन्यजातिहरूले बलि चढाउँछन्, ती तिनीहरूले परमेश्वरलाई होइन, तर दुष्ट आत्माहरूलाई चढाउँछन्; र तिमीहरू दुष्ट आत्माहरूसित सहभागी होओ भन्ने म चाहँदिनँ। तिमीहरूले प्रभुको कचौराबाट पिउन सक्दैनौ; तिमीहरूले प्रभुको टेबलबाट, साथै दुष्ट आत्माहरूको टेबलबाट भाग लिन सक्दैनौ। अथवा के हामी प्रभुलाई रिस उठाउँछौं? के हामी उहाँभन्दा बलिया छौं?” (१ कोरिन्थी १०:२०-२२)।
“अविश्वासीहरूसँग असमान भएर एउटै जुवामा नजोतिओ; किनकि धार्मिकताको अधर्मसँग के सङ्गति? अनि उज्यालोको अँध्यारोसँग के सहभागिता? अनि ख्रीष्टको बेलियालसँग के एकता? अथवा विश्वासीको अविश्वासीसँग के हिस्सा? अनि परमेश्वरको मन्दिरको मूर्तिहरूसँग के सम्बन्ध? किनभने तिमीहरू जीवित परमेश्वरको मन्दिर हौ; जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ: ‘म उनीहरूको बीचमा बस्नेछु, र उनीहरूका बीचमा हिँड्नेछु; अनि म उनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र उनीहरू मेरा जनहरू हुनेछन्।’ यसकारण ‘तिमीहरूका बीचबाट निस्केर आओ, र अलग होओ, प्रभु भन्नुहुन्छ; अनि अशुद्ध कुरा नछोओ, र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु।’ अनि ‘म तिमीहरूका पिता हुनेछु, र तिमीहरू मेरा छोराहरू र छोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान् प्रभु भन्नुहुन्छ।’ ” (२ कोरिन्थी ६:१४-१८)।
“हे साना नानीहरूहो, आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाइराख। आमेन।” (१ यूहन्ना ५:२१)।
“अनि कूशले निम्रोदलाई जन्माए; तिनी पृथ्वीमा पराक्रमी बन्न थाले। परमप्रभुको दृष्टिमा तिनीचाहिँ पराक्रमी शिकारी थिए; यसैकारण ‘परमप्रभुको दृष्टिमा निम्रोदजस्तो पराक्रमी शिकारी’ भन्ने आहान भनिन्थ्यो। तिनका राज्यको शुरुचाहिँ शिनार देशमा बाबेल, एरेख, अक्कद र कल्ने थियो।… अनि सारा संसारमा एउटै भाषा र एउटै बोली थियो। अनि यस्तो भयो — पूर्वबाट यात्रा गर्दै जाँदा तिनीहरूले शिनार देशमा एउटा मैदान भेट्टाए; अनि तिनीहरू त्यहीं बसे। अनि तिनीहरूले एक-अर्कालाई भने: “आओ, हामी इँटा बनाऔं र राम्ररी पोलौं!” अनि तिनीहरूसँग ढुङ्गाका निम्ति इँटा थियो, अनि मसलाका निम्ति अलकत्रा थियो। अनि तिनीहरूले भने: “आओ, हामी आफ्ना निम्ति एउटा शहर, र टुप्पाचाहिँ आकाशसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऔं; र आफ्ना निम्त एउटा नाम कमाऔं, नत्र हामी सारा पृथ्वीको सतहमाथि तितरबितर हुनेछौं।” अनि परमप्रभु मानिसका सन्तानले बनाइरहेको त्यो शहर र त्यो धरहरा हेर्न ओर्लनुभयो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो: “हेर, मानिसहरू एक भएका छन्, र तिनीहरू सबैको एक भाषा छ; अनि यो काम गर्न तिनीहरूले शुरु गरिरहेछन्; अनि अब तिनीहरूले गर्नलाई जे कल्पना गरेका छन्, सो तिनीहरूबाट नभई छोडिनेछैन। आओ, हामी तल जाऔं, र त्यहाँ तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिऔं, र तिनीहरूले एक-अर्काको बोली नबुझून्!” यसरी परमप्रभुले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट सारा पृथ्वीको सतहभरि तितरबितर पारिदिनुभयो; र तिनीहरूले त्यो शहर बनाउन छोडे। यसैकारण त्यसको नाम ‘बाबेल’ राखियो; किनभने त्यहाँ परमप्रभुले सारा संसारको भाषा खलबल पार्नुभयो; अनि त्यहाँबाट परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीको सतहभरि तितरबितर पारिदिनुभयो” (उत्पत्ति १०:८-१०; ११:१-९)।
यो नै संसारका मूर्तिपूजक धर्महरूको सुरुआत थियो। यसको नाइके निम्रोद नाम भएको कुनै एकजना घमण्डी राज्य स्थापक थियो। स्वर्गसम्म पुग्ने धरहराको निर्माण गर्ने इच्छा ज्योतिषविज्ञान (घाम, जुन र ताराहरूको उपासना)सँग सरोकार राख्ने धार्मिक अर्थको थियो। प्राचिन बेबिलोनीहरूले भौतिक रुपमै ताराहरूसम्म पुग्ने धरहरा निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका थिएनन्। तिनीहरूले आत्मिक रुपमा ताराहरूसम्म पुग्ने धरहरा निर्माण गरिरहेका थिए। तिनीहरू यस्तो धर्म चाहन्थे जसले तिनीहरूलाई मूर्तिपूजक रितिहरू र अन्य विचारशास्त्रहरूद्वारा “देवताहरू” सँग जोड्न सक्थ्यो।
“किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई झैं महिमा दिएनन्, न ता धन्यवादी नै भए; तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकम्मा भए, र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो बुद्धिमानी छौं भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने, र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावरहरू र घस्रिने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे।”
2. आयुर्वेदले झूटो प्रतिज्ञाहरू गर्दछ।
आयुर्वेद इन्साइक्लोपिडियालाई “चङ्गाइ, निरोधन र दिर्घायु जीवनको प्राकृतीक रहस्यहरू” भन्ने उपनाम दिइएको छ।
मानिसको पतन नै रोग र मृत्युको शरुवात हो भनी बाइबलले बताउँदछ। परमेश्वर विरुद्धको हाम्रो पापसम्म यो पुग्दछ। हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौं जो श्रापको अधिनतामा ऐया-आत्था गर्दछ र नयाँ गरी जन्मेकाहरू धरी त्यस श्रापको अधिनतामा छन् (रोमी ८:२२-२३)। हामीहरू मृत्युको शरीरमा जीउँदछौं (रोमी ७:२४)। पापको कारणले हाम्रो शरीरको मृत्यु हुन्छ। “पापको ज्याला मृत्यु हो…” (रोमी ६:२३)।
शुरुका मण्डलीहरूमा पनि परमेश्वरले हरेक पटक विश्वासीहरूलाई निको पार्नुभएन। पावलमा परमेश्वरले नहटाउनुभएको रोग थियो (२ कोरिन्थी १२:७-१०)। यस सवालमा पावलको निश्कर्ष चाहिँ पूर्ण स्वस्थपना नै परमेश्वरको इच्छा हो भनी दाबी गर्नेहरूको भन्दा पनि विपरीत थियो। उनले भने: “यसकारण ख्रीष्टका निम्ति म दुर्बलताहरूमा, निन्दाहरूमा, अभावहरूमा, सतावटहरूमा, क्लेशहरूमा आनन्दित हुन्छु; किनकि जब म कमजोर छु, तब म बलियो हुन्छु” (२ कोरिन्थी १२:१०)। यस वर्तमान संसारमा परमेश्वरले सिद्ध स्वास्थ्यको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन भनी पावलले बुझे, र उनले परमेश्वरको इच्छालाई स्वीकार गरे।
“किनकि म ठान्दछु, यस वर्तमान समयका दु:खकष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छैनन्, जो हामीमाथि प्रकट हुनेछ। किनकि सृष्टिको तीब्र आशाले पनि परमेश्वरका पुत्रहरूको प्रकट हुवाइलाई पर्खिरहेको छ। किनकि सृष्टि व्यर्थताको अधीनतामा राखिएको छ; आफ्नै इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले, जसले यसलाई अधीनतामा राख्नुभएको छ, यस आशामा; किनभने सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरका सन्तानको महिमापूर्ण स्वतन्त्रताभित्र प्रवेश गर्नेछ। किनकि हामी जान्दछौं, अहिलेसम्म पनि सारा सृष्टि एकसाथ ऐया-आत्था गरिरहेको र प्रसूति-वेदनामा तड्पिरहेको छ। अनि तिनीहरूमात्र होइनन्, तर हामीहरू पनि, जससँग आत्माको पहिलोफल छ, अँ हामी आफै पनि, धर्मपुत्र-ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हेर्दै आफूभित्र-भित्रै ऐया-आत्था गर्दछौं। किनकि आशाद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौं, तर जुन आशा देखीन्छ, त्यो आशा नै होइन; किनक जुन कुरा मान्छेले देख्छ, त्यसका लागि उसले अझै किन आशा गर्दछ र? तर जुन कुरा हामी देख्दैनौं, त्यसको आशा गर्दछौं भने हामी धीरजसँग त्यसको बाटो हेर्दछौं” (रोमी ८:१८-२५)।
3. आयुर्वेदिक औषधि तपाईंको स्वास्थ्यको निम्ति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
यस प्रकारका धातुहरू र अभ्रक वा माइका (mica) जस्ता खनिज पदार्थहरू मिसाउने कार्यलाई “रस शास्त्र” भनिन्छ। यसरी मिसाइएको मिश्रणहरूलाई भष्मा भनिन्छ। यो एउटा प्राचीन हिन्दु अभ्यास हो। यस शिक्षा अनुसार, धातुहरू र जडिबुटिहरूको सम्मिश्रणको परिणाम स्वरुप स्वास्थ्य सुधार हुन्छ। आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूले तिनीहरूको मिश्रण गर्ने प्रविधिद्वारा उक्त सूत्रीकरण सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास गरे तापनि, वैज्ञानिक प्रमाणले यो सत्य छैन भनी देखाउँछ।
“संयुक्त राष्ट्रमा आयुर्वेद रस शास्त्र औषधिको जाँचले बहुसंख्यामा प्रचुर धातुद्वारा विष लाग्ने नतिजा देखिएको छ। विशेषगरी नानीहरूलाई विषालु प्रचुर धातुको कारणले स्नायुतन्त्र सम्बन्धी समस्याहरू सिर्जना हुने डर हुन्छ।”
सन् २००४ र २००८ मा जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एस्सोसिएशन (Journal of American Medical Association) मा केहि अध्ययनहरू छापिएका थिए। “अनुसन्धानकर्ताहरूले भारत-उत्पादित केहि सामानहरूमा शरीरले सहन सक्ने भन्दा १०० देखी १००,००० गुणा अत्याधिक सिसा अनि/अथवा पारो सेवन हुने नतिजा आउन सक्छ भनी निश्कर्ष निकालेका छन्” (U.S. Food and Drug Administration’s Caution Alert About Ayurvedic Medicine, Oct. 16, 2008)।
एकजना वयस्क पुरुष वान्ता र झाडापखालाको कारणले अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। तिनी भारतमा तिनले खरिद गरेर दिनको एक चोटि सेवन गरिरहेका “शक्ति बढाउने” आयुर्वेदिक औषधि चक्कीदवारा संक्रमित भएका थिए। तिनको रगतमा सिसाको मात्राचाहिँ हुनुपर्ने सामान्य मात्रा भन्दा तीन गुणा अधिक थियो। त्यस औषधिको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक चक्कीमा विषाक्तपूर्ण मात्रामा सिसा, पारो, र आर्सनिक भेटियो (“Heavy Metal Poisoning from Ayurvedic,” British Columbia Medical Journal, March 2008)।
आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूले निर्दिष्ट गर्ने सम्पूरक भनेको रूखबाट निचोरेर निकालिएको एक प्रकारको तरल पदार्थ, गुग्गुल (Guggul), हो। यसलाई केहि मानिसहरूमा अङ्गहरूको उग्र क्षतिको जिम्मेवार गरिन्छ। “सन् २००१मा, क्यानडियन जर्नल अफ ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी (Canadian Journal of Gastroenterology) नामक पत्रिकाको एउटा लेखले एउटी प्राय: स्वस्थ रहने जवान महिलामा अस्नीक एसीड (usnic acid), ग्रीन टि (green tea) र गुग्गुल (Guggul tree extract) भएको बोसो काट्ने सम्पूरकको सेवनले पूर्णतया कलेजो बिग्रेको स्थिति सिर्जना भएको थियो” (“Ayurveda Medicine and Supplement Hidden Dangers,” EmaxHealth.com, Mar. 2, 2012)।
4. आयुर्वेद झूटा र ठग वैद्यहरूले भरिएको छ।
अहमदाबाद, भारतको प्रकाश बार्भलिया एउटा उदाहरण हुन्। तिनले एन्टि-ब्याक्टेरियल जस्ता प्रजातीय लेप किनेर अरू थोकसँग मिसाए र त्यसमा आफ्नै नाम वा लेबल राखे (“Ayurvedic Quack’s Clinics Raided,” The Times of India, Aug. 14, 2012)।
सन् १९९५ मा, जोनी फ्लिन्ट (Jonie Flint) ले दिपक चोप्रा र अन्य आयुर्वेदिक वैद्यहरूलाई मुद्दा हालीन् किनभने तिनको श्रीमानको श्वेतरक्तता वा ब्लड क्यान्सर (leukemia) रोग तिनीहरूले जाँच गरेका थिए। तिनको रक्तमासीमा “गर्मी”, पेटमा “वायू”, र नशाहरूमा चाप छ भनी तिनलाई बताइयो, र तिनलाई आयुर्वेदिक “शुद्धिकरण” चिकित्सा कार्यक्रममा हालियो जहाँ जडीबुटीजन्य उत्पादनहरू र मन्त्र हुनेगर्छ। तिनले आयुर्वेदिक सेवा र सामग्रीहरूमा $१०,००० खर्च गरे। डिसेम्बर १९९३ मा, आयुर्वेदिक वैद्यहरूले तिनको श्वेतरक्तता (leukemia) निको भयो भनि फ्लिन्टलाई भने, तर चार महिनापछि श्वेतरक्तता (leukemia) कै कारणले तिनको मृत्यु भयो। आयुर्वेदिक वैद्यहरूद्वारा तिनले धोका खाए र उचित औषधिमूलक उपचारको खोजी गरेनन्।
सन् २०१२ मा, महादेओ महादिकको मृत्यु आयुर्वेदिक वैद्यहरूलाई भा. रु. ५ लाख खर्च गरिसकेपछि मिर्गौला रोगको कारणले भयो। तिनीहरूले उनी निको हुनेछन् भनी प्रतिज्ञा गरेका थिए (“Two Ayurvedia Quacks Cheat 65-year-old of Rs.5Lakh,” DNA India, Aug. 16, 2012)।
आधुनिक औषधि परमेश्वरबाटको आशिष हो। बाइबलले बताउँदछ कि अन्तिम दिनहरूमा “ज्ञानको वृद्धि हुनेछ” (दानिएल १२:४)। समयहरू नियन्त्रण गर्नुहुने र मानिसहरूलाई बुद्धि दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ।
“दानिएलले जवाफ दिएर भने: “परमेश्वरको नाम सदा-सर्वदा धन्यको होस्; किनकि बुद्धि र सामर्थ्य उहाँकै हुन्; अनि समयहरू र बेलाबखतहरू उहाँले नै बदली गर्नुहुन्छ; उहाँले राजाहरूलाई हटाउनुहुन्छ, र राजाहरूलाई बसाल्नुहुन्छ; उहाँले बुद्धिमानहरूलाई बुद्धि र समझदारहरूलाई समझ दिनुहुन्छ”(दानिएल २:२०-२१)।
“अनि प्रकाशहरूको भरपूरीको कारणले म नापभन्दा बढी नफुलूँ भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् शैतानको एउटा दूत दिइयो — नापभन्दा बढी नफुलूँ भनेर मलाई मुक्काले हान्नाका निम्ति दिइयो। यो मबाट हटोस् भनी यस कुराका लागि मैले प्रभुलाई तीनपल्ट विन्ती गरें”(२ कोरिन्थी १२:७-८)।
“आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुमाथि भरोसा राख, र आफ्नै समझमाथि भर नपर! आफ्ना सबै मार्गहरूमा उहाँलाई मान; र उहाँले तिम्रा बाटाहरू सीधा तुल्याउनुहुनेछ” (हितोपदेश ३:५-६)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/01/katherine-hanlon-mod2s3-qFOc-unsplash-scaled.jpg 1656 2560 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-01-10 13:49:592021-04-15 14:21:44आयुर्वेदिक औषधिदेखि सावधान्!